वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : January 2010
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ January 27, 2010
माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई प्रतीकात्मक रुपमा एउटा बेलुनको रुपमा लिन मन लाग्छ मलाई। एक दशकको सशस्त्र द्वन्द्वको रहस्यमा त्यो बेलुन फुलेर बिशाल भएको थियो। प्रतिपक्षी राजनीति-त्यो पनि भूमिगत र सशस्त्र-मा भौतिक खतरा धेरै हुनु स्वाभाविक हो, तर यस्तो राजनीतिमा राजनीतिक पूँजी बढाउन भने खुब सजिलो हुन्छ किनभने अरु केहि नगरी सत्ताको बिरोध मात्रै गरे हुन्छ। यस्तो राजनीतिमा आफ्नो कमजोरी र गल्तीका लागि पनि सत्ताधारीलाई दोष देखाउन सकिन्छ। खुल्ला राजनीति बिल्कुल फरक हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि नेताको भनाई र गराईको खाडललाई जनताले सजिलै देख्छन्। पहिला अरुमा पनि देखिएको थियो, अहिले माओवादी र प्रचण्डमा देखियो-खुल्ला राजनीतिमा आएपछि बेलुनको हावा खुस्केको। माओवादी र प्रचण्डको हकमा त्यो हावा खुस्काई-त्यो ‘स्खलन’ झन् तिब्र देखियो।
नेपाली राष्ट्रियतामा धेरै समस्याहरु छन्, भारतको हामीप्रतिको नीति मिचाहा छ। हो, भारतलाई दोष दिन सक्छौं हामी तर मूल दोष भने आफैंले लिन तयार हुनैपर्छ। हाम्रो राष्ट्रिय मानसिकतामा भारतलाई हाम्रा नेता र दलहरुले एउटा हाउगुजीको रुपमा स्थापित गरिदिएका छन्। तर भारतसंगको सम्बन्धबारे हाम्रो एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने र त्यसलाई लागु गर्नका लागि एउटा प्रभावशाली कूटनीतिक संयन्त्र बनाउनेतिर कसैले सोचेको-पहल गरेको छैन। केहि समय पहिला मैले कान्तिपुरमा भारतीय जनता पार्टीका एकजना बरिष्ठ नेताको अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ, तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला। हामीलाई भारतको कांग्रेस आई र भाजपाको आपसी सम्बन्ध कस्तो छ थाहै छ, तर त्यहाँ उनले भारत सरकारको नेपाल नीति जे छ, हाम्रो दलको नेपाल नीति पनि त्यहि हो भनेका छन्। नेपालसंगको सम्बन्धबारे भारतीयहरुको स्पष्ट र समग्र धारणाको प्रमाण हो त्यो। हामीकहाँ त्यस्तो कुरा असम्भव लाग्छ! भारतबारे हरेक दल र उस्तै परे हरेक नेताका आफ्नै धारणाहरु छन्। यस्तो स्थितमा हाम्रो राजनीति र राष्ट्रिय जीवनका कुनै पनि अंगमा खेल्नु भारतका लागि साह्रै सजिलो काम हो। हाम्रो राष्ट्रियताका मूलभूत समस्याहरुको समाधान त्यहि स्पष्ट र एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो। दासढुंगा र दरबारकाण्डको खरानी खोस्रेर र अरुलाई दोष लगाएर मात्रै केहि हुनेछैन।
Image Source: Click Here हाइटीमा बिध्वंशकारी भूकम्पले जनधनको अपार क्षति गराएको छ। खण्डहर बनेको राजधानी शहर, सडकमा छरिएका लाशहरु, चिच्याईरहेका घाईतेहरु र फेरि भूकम्प जाने संभावना देखेर भागिरहेका मान्छेहरुको लश्कर टेलिभिजनमा मात्रै देख्दा पनि हामीलाई यस्तो त्रासद लागिरहेछ भने पोर्ट अउ प्रिन्समा त्यो प्रकोप आफैंले भोगेका-देखेका लाई कस्तो भईरहेको होला?!
Image Source: Click Here Posted by
तस्बिर साभार: Spiny Babler Museum 'माधवी' संगको मेरो सानो ब्यक्तिगत 'चिनजान' बारे कुरा गर्नुभन्दा पहिला टोल्स्टोयको 'वार एण्ड पिस' को कुरा। यो किताब मैले अझै पढेको छैन। पढ्छु (र आफैसंग राख्छु) भनेर किनेपछि त्यसको भिमकाय आकार देखेर (र किताबको महत्वका कारण अलिक गम्भिरताका साथ पढ्नुपर्ला भन्ने सोचेर) कुनै लामो बिदा कुर्न थालें। किताब (अंग्रेजी अनुवाद) किनेको १६ वर्ष भयो होला, त्यो 'लामो बिदा' भने अझै जुरेको छैन:) टोल्सटोयकै अर्को अमर कृति 'आन्ना कारेनिना' भने कलेज जीवनको कुनै बिदामा एकचोटि पढेको थिएँ।
आजभन्दा डेढ-दुई वर्ष पहिला कुनै साहित्यिक पत्रिका ('अभिब्यक्ति' वा 'रचना' मध्ये एउटा हो जस्तो लाग्छ) मा मदनमणि दिक्षितज्यू स्वयंले लेख्नुभएको 'माधवी' सम्बन्धी एउटा चर्चा पढेको थिएँ। त्यसमा उहाँले 'माधवी' माथि उहाँले आशा गरेभन्दा ज्यादै कम चर्चा, समालोचना आदि भए भनेर लेख्नुभएको छ। किन यस्तो भएको होला? नेपालमा गम्भिर साहित्यिक कृतिहरु पढ्ने, चर्चा गर्ने काम कम भएको हो कि? अथवा दिक्षितज्यूको विद्वतासंग दाँजिन सक्ने समालोचकहरु हुँदै नभएका हुन् कि? कारण जे र जति भएपनि हाम्रो भाषा र साहित्यको लागि त्यो राम्रो लक्षण भने होईन। 'माधवी' पढ्दाताकाका दिनहरुमा पढ्ने कुरामा थोर-बहुत जाँगर चलाएपनि लेख्ने कुरामा भने म महाअल्छी थिएँ। 'माधवी' पढेपछि त्यसबारेमा भने केहि हरफहरु लेखेको रहेछु। मेरो गञ्जागोल मनस्थिति झल्काउने हस्ताक्षरमै पढ्नुहोस् पहिला:)
केरमेट रहित गर्न सकेको भए यस्तो हुन्थ्यो होला:) "माधवी"
जे होस् , उपन्यास हाम्रो नेपाली साहित्यको एउटा अमूल्य निधिनै बनेको छ। २०५५/६/२८
(रात्री १०:०० बजे घर)
[आज फेरि तपाईँहरुलाई इतिहासको ब्याजबाट यो टुक्रो चखाउन चाहन्छु। मासिक साहित्यिक पत्रिका "रचना" को कुनै अंकमा प्रकाशित भईसकेको छ यो।
टुक्रोको स्वाद कस्तो छ, भन्न नभुल्नुहोला।]
यन्त्रहरू, यान्त्रिक समीकरणहरू र रेखाहरूसँग यन्त्रवत् चलेपछि, साँझ पर्दासम्म- मुटु यन्त्रवत् टुक्रिएर चोइटा चोइटा बनिसक्छ; म थुपार्छु चोइटाहरू र कलमको अगुल्टो झोसेर फुकिदिन्छु, हुर्हुरी बल्छ मेरो कविताको आगो र म एकपटक फेरि जन्मन्छु। -कार्तिक ४, २०५७